सन नेपाल लाईफको जीवन बीमा कोषमा ७८ करोड, नाफा र अन्य सूचक कस्तो ? – Insurance Khabar
सन नेपाल लाईफको जीवन बीमा कोषमा ७८ करोड, नाफा र अन्य सूचक कस्तो ?
प्रकाशित मिति : १ मंसिर २०७६, आईतवार १७:३१
काठमाडौं । सन नेपाल लाईफले प्रथम त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको छ । कम्पनीले असोज मसान्तसम्मको तीन महिनामा ७८ करोड छ लाख ८१ हजार रुपैयाँ जीवन बीमा कोषमा दाखिला गरेको छ । कम्पनीले कोषमा कूल ९५ करोड जम्मा गरेको छ ।
सञ्चालन अवधीमा कम्पनीले तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ । गत आवको सोही अवधीमा कम्पनीले तीन करोड १७ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो । यद्यपि बीमा कम्पनीहरुको मुनाफा बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन पछि हेरफेर हुनसक्नेछ ।
कम्पनीले सञ्चालन अवधीमा खूद बीमा शुल्क २४ करोड पाँच लाख ६० हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १३ करोड ५४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो । त्यस्तै कम्पनीले समीक्षा अवधीमा २४ करोड पाँच लाख ५९ हजार रुपैयाँ कूल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष जम्मा १३ करोड रुपैयाँ कूल बीमा शुल्क आर्जन गरेको कम्पनीले समीक्षा अवधीमा झण्डै दोब्बर कूल बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएको हो ।
समीक्षा अवधीमा कम्पनीले कूल चार हजार ३०८ बीमा पोलिसी बिक्री गरेर सो प्रगति हासिल गरेको हो । त्यस्तै, कम्पनीले नौ वटा दावी भुक्तानीका लागि ७६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत वर्षको असोज छ गते कारोबार सुरु गरेको कम्पनीले सञ्चालन अवधीको एक वर्षमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सफल भएको छ ।